Ny fomba nataon’ny vondrona Facebook iray hanampiana amin’ny fanatsaràna ny fitaterana an-dalamby ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Natao hanomezana torohay sy fanampiana ireo mpandeha ny vodron'ny mpankafy
Voadika ny 19 Marsa 2021 11:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 日本語, Ελληνικά, Français, русский, বাংলা
Ampahany amin'ny tantara: ny voalohany indrindra tamin'ireo fiarandalamby mandeha ambony làlana tery, nalefa tamin'ny 14 Febroary 1896, tao amin'ny làlana Rupsha-Bagerhat. Sary an'i Rajib Hossain tao amin'ny pejin'ny Mpankafy ny Bangladesh Railway. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny fitaterana an-dalamby no fitaovana fitaterana iraisana be mpampiasa indrindra ao Bangladesh. Matetika nantsoina hoe “fitaterana ho an'ny zanabahoaka”, rafitra fitaterana olona sy entana, tsy mahafaty antoka, manaja ny tontolo iainana, ahazoana aina sy azo antoka. Kanefa, na nitombo aza ny fampiasambola amin'io sehatra io, mbola tsizarizary ny tolotry ny fitaterana an-dalamby ary nisedra fatiantoka goavana ny Bangladesh Railway tato anatin'ny dimy taona lasa.
Ny orinasam-panjakana Bangladesh Railway no nandimby ny Eastern Bengal Railway Company, izay nanomboka tamin'ny 1857, nandritra ny vanimpotoana fanjanahantany britanika. Misy karazany telo ny fitaterana an-dalamby ao Bangladesh, antsoina hoe Broad Gauge, Meter Gauge sy Narrow Gauge. Ny fitambaran'ny halavan'ny lalamby, raha ny rakitra tamin'ny 2018 dia 2955,53 km ary ny masoivohom-pitaterana dia mampiasa olona 25.000 manerana ny firenena.
Nisy hetsika santatra marobe nataon'ny governemanta ao Bangladesh mba hampanarahana ny toedrandro ny lalamby, isan'izany ny fametrahana fotodrafitrasa maoderina, ny fividianana lohamasinina, fampidirana ny nomerika hitantanana ny momba ny mpandeha sy ny fivarotana tapakila an-tambajotra. Ankoatra ireo fatiantoka, ny laharampahamehana dia ny fiatrehana ny olana mikiky ny fitaterana an-dalamby: ireo mpandeha tsy manana tapakila, ny fangalarana solika, ny tsy fisian'ny fikolokoloana, fipetrahana sy fibodoana ny tanin'ny lalamby, ny kolikoly sy ny fitantanana ratsy, izany rehetra izany dia samy nandona ny kalitaon'ny tolotra avokoa ary miteraka fahataràna.
Niroso mba hitondra fiovàna ireo ‘mpankafy’ ny fitaterana an-dalamby. Roknuzzaman Rokon, mpiasa fahiny tao amin'ny fitaterana an-dalamby, no nanorina ny Bangladesh Railway Fan Group tamin'ny 2008 ary marobe amin'izao fotoana ireo mpandrindra no miaraka mampandeha azy. Niresaka tamin'i Rokon tamin'ny alàlan'ny webchat ny Global Voices ary nambarany fa tany am-piandohana, ny hitahirizana ilay tambajotra sy hizaràna ny tantara no tena tanjon'ilay vondrona, hizaràna sary sy tantaran'ny fandehanana fiaran-dalamby. Satria nitombo ny isan'ireo mpikambana, lasa ambohi-pihaonan'ny torohay sy ny tantara momba ny fitaterana an-dalamby, ny tolotra sy ny fiadanan'ny mpandeha izy izao. Ankehitriny, io vondrona Facebook tantanin'olontsotra io dia manana mpikambana mavitrika miisa 150.000 mahery. Misy ihany koa pejy iray ho an'ny daholobe, manana mpitia miisa 56.000, toerana ahafahan'ireo tsy mpikambana mandefa fanehoankevitra sy mifanakalo hevitra.
Nisy fampiharana iray natomboky ny governemanta ao Bangladesh, nomena ny anarana hoe Bangladesh Train Tracker izay manana pejy Facebook ihany koa izaràna vaovao ofisialy vitsivitsy. Kanefa, marobe ireo mpampiasa no mahatsapa ho mahazo aina kokoa rehefa mametraka fanontaniana ao amin'ilay vondron'ny Mpankafy. Ambaran'ny mpandrindra ilay vondrona, Shahabuddin Ahmed, fa vonona mandrakariva ireo mpikambana hamaly haingana sy hanome torohay ara-potoana araka izay azony atao.
Tsy mbola misy fanavaozam-baovao ihany ny tranonkalan'ny Bangladesh Railway. Ity ny ohatra iray amin'ny singa tena manandanja amin'ireo torohay zarain'i Ahmed ao amin'ny vondron'ny mpankafy:
Torohay avy amin'i Maksudul Alam.
Nanampy tamin'ny fisorohana loza mahatsiravina ny sasany tamin'ireo torohay tao amin'ilay vondrona, satria manasongadina ny olana teny misy amin'izao fotoana. Ohatra iray azo tsapain-tanana ny momba ireo trangana fitorahana vato ny fiarandalamby eny am-pandehanana, izay aretina namely ny Bangladesh Railway nandritra iny taompolo lasa farany iny. Araka ny tatitra iray vao haingana, misy 20 ireo toerana samihafa lalovan'ny lalamby ao amin'ny firenena, amin'ireo 150 mahery miseho isantaona, miteraka ratra ho an'ny mandeha sy ny mpiasan'ny lalamby—ary nitondra hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Isantaona ny lalamby dia tsy maintsy mandany volabe hanamboarana ny fahavoazan'ireo varavarana sy varavarankely amin'ny fiaran-dalamby.
Araka ny nambaran'ny mpitondra tenin'ny Bangladesh Railway, sarotra ny hilaza ny antony, saingy dia voatoraka noho ny antony maro samihafa ireo fiarandalamby, ataon'ireo andian-tanora jiolahimboto na indraindray aza dia ireo mpiasan'ny masoivohom-pitaterana an-tanety mihitsy, satria nidina ny vola miditra amin'ireo fiara mpitatitra noho ny hamaroan'ireo olona misafidy ny handeha amin'ny fiarandalamby izay mora kokoa.
Ny 13 Febroary 2021, nalefan'i Shahajada Farhan Odhi tao amin'ny Facebook ny momba ny tranga tahaka izany ary nampidirany sary:
Mitarika fanentanana iray ihany koa io vondrona io hiadiana amin'ny fitorahana vato. Shovon Hossain, mpikambana iray, nandefa momba an'io ary nizara rakitra iray mampiseho ny hetsika ataon-dry zareo.